Imigomo Yokusebenzisa / Legal -
Isihloko 1 - Scope.
Izimo jikelele ukudayiswa zisebenza kuphela website yethu. Noma ngubani ovakashela nobe kokuthenga via isayithi bavume kokuba ikhono ukusebenzisa izimo ezichazwe ngezansi, ukuthi Usekhulile kwezomthetho hhayi ngaphansi sivikelwe.
You mukela kokuba ezamile funda la nemibandela ngaphambi obeka oda. Ukubeka i oda kusho ukuthi nawe ngokugcwele futhi ngokungenamibandela kula nemibandela. Akukho Inkontileka sokudayiselana phakathi kwamakhasimende kanye nathi kuphela ngokuthi of the ukwamukelwa oda lakho ngathi. Ukuthi ukwamukelwa kuyothathwa ephelele futhi kuyothathwa kuye ngempumelelo babexhumana ngesikhathi Dispatch ngathi i-imeyili eqinisekisa ukuthi oda wakho ngomkhumbi
Isihloko 2 - Ukushintsha Izimo yokuthengisa.
Singase guqula la Imigomo Yokusebenzisa nganoma yisiphi isikhathi, kuncike lapha nalaphaya avele kusayithi lethu. Wena ke belulekwa ukuba abhekisele njalo kuya version yakamuva ye-Imigomo yokusetshenziswa lapha unomphela.
Isihloko 3 - Umyalo.
Ngaphambi wayala, sicela uqaphele incazelo imikhiqizo ofuna ukuthenga. Nokho, uma naphezu imikhiqizo yethu siqaphile bazibonakalisa engenamsebenzi emva oda lakho, sicabanga akukho icala. Idatha alotshwa website eziyimisebenzi ubufakazi oda. Idatha eyalotshwa uhlelo lokukhokha kuyisici ubufakazi zezimali.
Isihloko 4 - Price.
Siyaligodla ilungelo lokushintsha amanani nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso.
Isihloko 5 - Inkokhelo.
Ukukhokhwa yonke order kumele kwenziwe uma iyala by umthengi. Ngaleso sikhathi akukho, izinkokhelo angeke ithathwa njengoba wesikhashana. Ukusetha oda, umthengi has zonke izindlela zokukhokha okukhulunywa kwifomu oda. Umthengi liqinisekisa ukuthi mkhiqizo uye izimvume ezidingekayo ukusebenzisa indlela yokukhokha akhetha, lapho uqopha umyalelo lokuthenga.
I exactspy.com uyaligodla ilungelo lokumisa noma lokukhansela yimuphi oda futhi / nobe ukulethwa, kungakhathaliseki nature kwabo kanye izinga lokusebenza, for ukungakhokhi of yimuphi sum ekhokhwa umthengi, nobe zokukhokha Isigameko.
Isihloko 6 - Wokuzihlangula.
exactspy ngeke ozoba nesibopho sokukhokhela ngqo noma engaqondile okungase ziphakame kusukela ukuthengwa kwemikhiqizo. Ukungakwazi nhlobo noma ngokwengxenye ukusebenzisa imikhiqizo, ngokwengxenye ngenxa ukungavumelani imishini abakwazi esingalethi icala exactspy nobe kuphakame yimuphi isinxephezelo nobe nokubuyisela.
Isidlulisilwazi links kwamanye amasayithi. exactspy disclaims nganoma yimaphi ecaleni lapho okuqukethwe kulezi izingosi zingqubuzana nemithetho neziqondiso.
Ngaphakathi imingcele yalokho kuvunyelwe umthetho, le nkampani unikeza exactspy, exactspy.COM site kanye okuphakathi on an "njengoba 'futhi lenza akukho ukumelwa noma unikeza akukho siqiniseko of yiluphi uhlobo, noma eshiwo noma somlomo mayelana nokusebenza kwayo noma nokuqukethwe yayo.
Yonke imininingwane kuhlanganise izitatimende eziphathelene ukutholakala kanye ukuhambisana imikhiqizo kusayithi exactspy abanalo value izivumelwano.
Ngaphezu exactspy akusho ukumela, nobe ithathelwe ukuthi ukwaziswa kufinyeleleke via kwisayithi exactspy.COM linembile, ephelele noma yamanje.
Isihloko 7 - Service Technical.
exactspy akanawo inkonzo technical imikhiqizo ithengiswe esakhiweni. Imikhiqizo ahlinzekwa nge ezinikeza iziqondiso ngesiFulentshi on umkhiqizo kanye / nobe English.
Isihloko 8 - Law efanele.
Lolu inkontilaki kuyinto komthetho. Ulimi yalombhalo French. Uma kwenzeka zokuphikisana izinkantolo of the State French bayoba esigunyaziwe.
Isihloko 9 - Izimangalo.
Ngokuba sonke izikhalazo Xhumana nathi
Isihloko 10 - MMS ukuthumela.
Ngokuhambisana nemithetho amazwe athile, uvuma ukuthumela imiyalezo MMS eliqukethe spyware kuya endaweni ogunyazwe live ikontraga. Yimuphi umzamo ukuthumela ezweni ogama umthetho awumvumeli le operation (cabangela iqiniso ngokuthumela le spyware ngaphandle kolwazi lomuntu) kungaphumela izinyathelo zomthetho ngawe by nomamukeli.
Isihloko 11 - Isikhumbuzi
exactspy software udayiswa izinkampani noma abantu ababa ngumnikazi Funny ngawo befisa ukulawula ukusetshenziswa kwabo.
Lokhu ukusetshenziswa uvunyelwe mayelana nje njengoba iqhutshwa ngokuhambisana nemithetho in force kuleli on inhlonipho izimfihlo zabanye.
Kungumsebenzi of umsebenzisi we-exactspy software ukuze uqinisekise ukuthi ukusebenzisa kwabo kuncike yonke imithetho esebenzayo ezweni lakhe futhi eyodwa lapho software isetshenziswa.
Ngokuqondene, kwenqatshelwe ukuyisebenzisela ngezinhloso echazwe njengo okhohlisayo, bengazi kumuntu usebenzisa ifoni.
By ukulanda futhi ukufaka isofthiwe on a phone exactspy, uyavuma ukuba ngumnini mobile nokuthi inkontilaki waso nge opharetha mobile kuyinto egameni lakho.
Akwanele ukuba kube umnikazi kuphela ukuthenga noma nje umnikazi mobile. Wena futhi sivume ukuthi ukusetshenziswa wenze intando ezicini zonke ngokuhambisana nemithetho in force ezweni lakini futhi yezwe lapho yena angakwazi noma ingasetshenziswa ngeke.
Londoloza SMS, lalela izingxoxo, thola isikhundla a imisebenzi ezihambayo azivunyelwe uma lwenziwa on amafoni olungolukaJehova nabanye abantu noma izinkampani kanye / noma abantu abasebenzisa ucingo nge exactspy:
– Abanalo ikhono ukukhubaza isofthiwe
– Ingabe hhayi aziswa ngokubhala izici software
– Ezingakenziwa enganikwanga esivumelwaneni sabo ukuze ukusetshenziswa kwawo ngokucacile ngokubhala futhi ibuye unconstrained futhi bazi.
Lapho la malungiselelo kungukuthi kuthathwe, umuntu noma inhlangano oxhumene misebenzi bona yecala yayo ephula izimfihlo zabanye.
Kuyoba yisigwebo njengoba code lobugebengu wezwe lakhe ngeke ucacise ngendaba.
exactspy nabadayisi uphethe akukho icala futhi akuzona obhekene yimuphi kabi futhi / noma umonakalo obangelwa software yayo noma imikhiqizo yayo. Lona umsebenzisi ekupheleni othatha umthwalo ukuhlonipha yonke imithetho yezwe lakhe of sokuhlala nalabo lapho isofthiwe angasetshenziswa exactspy. Ngokuthenga futhi ulanda software exactspy, uyavumelana osekushiwo.
Ngaphakathi komthetho wena
Mayelana njengoba ifoni bese sokubhalisa ukuze opharetha mobile ephethwe umuntu - ummeleli wezomthetho, umqaphi, njll. - Noma inhlangano (Izinkampani, Ukuzihlanganisa, izinhlangano, njll ..) Uyaziswa futhi uyavuma ngokubhala, ngaphandle ngokucindezelwa konke, ukuthi ukunyakaza kwakhe nezingcingo, SMS kanye E-mail ingaziwa yinkampani, ukusetshenziswa isofthiwe kusemthethweni.
It is nokho kakhulu Kunconywa ukuba ubuze ifemu yomthetho uma kungekho ezinye izingqinamba ukucabangela maqondana imithetho in force kuleli lizwe ukusebenzisa isofthiwe.
Lezi izinyathelo ezithathwe, uyojabula ngokuthi ekuthuthukiseni umkhiqizo amaqembu akho bomsebenzi imiyalezo kanye nezokuxhumana ethunyelwe nabalingani bakho amakhasimende kanye nabaphakeli.
Endabeni umndeni, kusukela lokuthi abaqaphi noma kukhona abanikazi nobe co-abanikazi bamalungelo iselula noma abanikazi joint of the isikhokhelo ne opharetha mobile, uma ingane kuza ubudala noma uma ezinkulu, kodwa uyavuma ngokubhala ngokuthi ngocingo wakhe izingcingo, SMS kanye E-mail kungenziwa bamlalela futhi ukufunda ngokuhambisana nemithetho yezwe, nawe ngempela banelungelo ukusizakala namathuba anikezwa exactspy ikakhulukazi umongo ukuvikelwa kwengane ezingozini ezifana udlame esikoleni, elalingabakhohlisi, izidakamizwa, ukunukubezwa, ingasaphathwa kuphela esakazwa kunazo.
You are ngokungemthetho
Nokho, akusiyo lwezomthetho inhloli. Lalela ucingo izingxoxo ngaphandle kwemvume, on a phone olungolukaJehova omunye umuntu, bengazi kuye, ukulandela ukunyakaza zakhe, nokunciphisa yombhalo wakhe imiyalezo, njll.
You mukela njengoba ayeke wafunda la mazwi ngonembeza omuhle. Uma unemibuzo ezengeziwe, xhumana nathi nge Ifomu yethu contact..